Indlu enombono omuhle ka-Struer we-Limfjord. - I-Airbnb
Indlu enombono omuhle ka-Struer we-Limfjord.
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Johan Christian
U-Johan Christian Ungumbungazi ovelele
Indlu itholakala kahle emthambekeni obheke e-fjord futhi inamamitha angama-300 endaweni yabahamba ngezinyawo nezitolo. Jabulela umoya we-marina noma izindawo zokudlela ezise-fjord.
Indlu inesitezi esiphansi kanye nesitezi esi-1. Phansi kukhona igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala, ikhishi, igumbi lokugezela, igumbi lezinsiza kanye nesitsha sokugeza. Esitezi sokuqala kunamakamelo okulala ama-2, indlu yangasese, igumbi lokuhlala kanye ne-balcony enkulu ebheke i-fjord.
Sebenzisa leli thuba eliyingqayizivele ukuze ujabulele idolobha laseStruer kanye ne-fjord ngendlela engcono kakhulu.
Indawo emaphakathi phakathi Struer nge ibangana kakhulu kulo lonke itheku endaweni nokuphila ezitholakala marina khashana dalwa amamitha angu-300 kuphela ukuze Struer abahamba ngezinyawo emgwaqeni izitolo, izindawo zokudlela, amathilomu inikeza amathuba ekahle ukuhamba izindawo ezimaphakathi ngizwe ngempela lomuzi omuhle.
4.90 · 143 okushiwo abanye
I-Struer itholakala endaweni ebukekayo. Kukhona izindlela zokuhamba izintaba endaweni futhi iKilen ezungeze iyindlela enhle.
Ibhishi le-Bremdal elilungele izingane 1.8km noma i-Østre beach 2.5km ukusuka endlini kanye nehora elingu-1/2 ukushayela ukusuka eNorth Sea.
I-Venø, engabonwa usendlini, leyo ngomzila wesikebhe omfushane wase-Denmark emizuzwini emi-2 nje. inikeza imvelo enhle kanye nendlu yezihambi kanye nekiosk.
Indawo enamagquma yiToftum Mountains kanye nolwandle lwaseHumlum yindawo enhle. E-Humlum kune-Struer Golf Course.
I-Klosterheden Plantage, indawo yesithathu enkulu kunazo zonke yamahlathi eDenmark enemizuzu engaba ngu-20. ukushayela lapho kunemizila emihle yokuhamba futhi lapho umuntu angaba nenhlanhla yokubuka ama-beaver.
Uma ufuna ukuzitotosa, kukhona i-Kurbadet Limfjorden ethekwini, 10 min. asuke endlini.
Ethekwini kukhona nezifundo ze-Cable Fun, lapho ungaqasha khona ama-SUP board, ama-wake board ngekhebula, ama-water skis, ama-wetsuits nezinye izinto zokusebenza. Isizini yokuvula isuka cishe. March - September.
Esikhumulweni semikhumbi ngokwaso ngokuphathelene nezifundo ze-Cable Fun, i-StruerFun Park iye yasungulwa ngesikhathi sasehlobo, lapho kukhona khona izithiyo/isifundo somsebenzi esikhulu esine-inflatable.
Ethekwini, kukhona nenkundla yegalofu encane eyi-hole hole adventure eyasungulwa ngoJuni 2021.
E-Bremdal Strand, ukwakhiwa kweNdlu yase-Limfjord kuyaqhubeka futhi kulindeleke ukuthi kuqedwe ngo-2021. I-Limfjord House izo, phakathi kwezinye izinto, hlala i-kayak kanye neklabhu yokugwedla futhi ube indawo yezivakashi zasolwandle.
Ngezinyanga zasebusika, sekusungulwe indawo yokuphumula eqhweni ehholo ledolobha emgwaqeni wabahamba ngezinyawo.
Lapho ubhukha, isixhumanisi esiya kumawebhusayithi sifakiwe.
Ibungazwe ngu-Johan Christian
UJohan Christian Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Struer namaphethelo